Akhriso Oo Dhageyso Suuradda Maryam Iyo Mucjisooyinka ku jira tiro ahaan (Mucjisada Qur’aanka) – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Akhriso Oo Dhageyso Suuradda Maryam Iyo Mucjisooyinka ku jira tiro ahaan (Mucjisada Qur’aanka)
Suuraddani Maryam waxay kamid tahay suuradaha Quraanka kariimka ee 114ta suuradood ka kooban.
Waxay ka warrantaa qisooyin dhowr ah, waxayna magaca ka sidataa oo lagu sharfay Maryama Al Cadraa bint Cimraan- nebi Ciise nabadi dushiisa ha ahaatee hooyadiis.
Suuraddani waxay leedahay mucjiso qiseed cajiib ah, mucjiso balaaqo iyo luqawi ah, iyo mucjiso raqameedyo badan. Waxaynu horey uga soo hadalnay mar aynu ka hadleynay mowduuc ku saabsanaa Aadam iyo Ciise oo ahaa nebiya Ilaahay oo hore, kuwaasoo uu abuurkoodii hore ku billawday qaab mucjiseed, innagoo raqam mucjiseedyadii aynu markaasi adeegsanaynay ee kala ahaa raqamyada 7 iyo 19 oo labaduba ah labada raqam mucjiseed ee ugu weyn Quraanka kariimka ayaanu wax kasoo taabannay raqam mucjiseedyada suuraddani Maryam.
Haddaba haddaynu maanta dhinac kale ka eegno raqam mucjiseedyada suuraddan, kaalayoo bal aynu eegno raqamka 7 oo ah asaas mucjiseedka Quraanka kariimka iyo kownka, iyo raqamka 114 oo isaguna matala 114ta suuradood ee Quraanka kariimka iyo mucjisada suuraddani Maryam.
Suuraddani Maryam, waxay kamid tahay suuradaha ku billawday xuruufta mucjisada Quuraanka ina tusinaya ee loo yaqaano ”Xuruuful muqattac”, amaba xuruufta go’an. Kuwaasoo macnahooda aanay cid kale aqoon Allaha cilmiga badan uun mooyaane. Waxay ka billaabataa sida tan: (كهيعص). Xuruuftani ay suuraddu ku furfuratay haddaynu eegno inta mar ee uu xaraf waluba kusoo noqnoqday isla suuraddan dhexdeeda, waxaynu heli doonnaa in:
Xarafka Kaaf lagu xusay suuraddan dhexdeeda 137 mar
Xarafka Haa’ lagu xusay suuraddan dhexdeeda 175 mar
Xarafka Yaa’ lagu xusay suuraddan dhexdeeda 343 mar
Xarafka Cayn lagu xusay suuraddan dhexdeeda 117 mar
Xarafka Saad lagu xusay suuraddan dhexdeeda 26 mar.
Jamac wadareedka tirooyinkani ayaa waxay yahiin isu geyntooda 798. Taasoo ka dhigan dhowr jibbaarka raqam mucjiseedka 7, Subxana-Allaah!!.
7*114= 798 Subxana-Allaah!!.
Ma garanaysaa raqamka dhowr jibbaarkiisa 7 aynu ku helayna 798 ee ah 114, waxa uu yahay isaguna? Waa cadadka suuradaha Quraanka kariimka ah.
Tani miyaanay ahayn mucjiso raqameed oo ku tusineysa in xaraf kasta iyo cadad kastoo kamid ah Quraanka kariimka uu ku dhisan yahay mucjiso weyn oo mud-hil ah. Tani miyay tahay masaaddafo ama waa doonis Alle iyo inuu kitaabkani yahay mucjisada weyn ee kownkani Eebbe usoo dejiyey.
Dhageyso Tafsiirka Aayada Koowaad Illaa Aayada 11-aad
Mahad waxaa iskaleh Allihii innaga yeelay ummad Islaam ah.
Arimaha Diinta: Baabka Soo Noqodka Sheydaan Waswaaska Salaada….
KaLaFoGe November 1, 2015 November 1, 2015
Qiso Aad Iyo Aad Cajiib U Ah Mudana In Lagu Cibro Qaato ‘Xaqii Dulmanaha’..
KaLaFoGe March 1, 2015 February 28, 2015
Daawo Muuqaal Cajiib Ah Nin isku dayay inuu nolosha isku aaso
KaLaFoGe April 11, 2014